Murashaxiinta Guddoonka Baarlamaanka Koonfur Galbeed Oo Maanta Khudbadahooda Jeedinaya – Goobjoog News
Iyadoo shalay la diiwaan galiyay murashaxiinta u taagan qabashada xilka guddoonka baarlamaanka Koonfur galbeed Soomaaliya ayaa haddana waxaa la filayaa in murashaxiintaas ay kudbadahooda maanta ka jeediyaan magaalada Beydhabo ee xarunta gobalka Baay.
Xildhibaan Maxamed Cabdinuur iyo xildhibaan Dr Cali Saciid Fiqi ayaa ku loolamaya booska guddoomiyaha guddoonka baarlamaanka maamulka Koonfur galbeed, halka xildhibaan Aamina Isaaq Maxamed iyo xildhibaan Maxamed Nuur Maxamed ay u tartamayaan xilka guddoomiye ku xigeenka 1-aad, waxaana kaliya guddoomiye ku xigeenka 2-aad u tartamaysa Xildhibaan Shamso Maxamed Yarow.
Guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka Koonfur galbeed ayaa waxa ay horey u shaaciyen in in 1-da April oo berry ku began in la qaban doono doorashada guddoonka baarlamaanka maamulkaasi.
Waxaana laga dhursugayaa cidda ku soo bixi donta xilka guddoomiya iyo labadiisa ku xigeen, maadaama madaxweyne Laftagareen uu doonayo shaqsiga noqonaya gudoomiyaha in uu noqdo mid siyaasad ahaan ay is fahami karaan.
Howlgalo ay ciidamada dowladda ka sameeyeen degmada Hilwaa oo lagu qabtay rag lala xiriirinaayo Al-shabaab.
Golaha Wasiirada Oo Maanta Ansixiyay Siyaasadda Naafada Qaranka
Warbixin:- Naafada Ku Dhaqan Magaalada Muqdisho Oo Cabasho Ka Muujiyay Xaaladda Ay Ku Nool Yihiin (Dhageyso)
Rgxuwb eidtzi cialis over the counter 2020 cialis over the counter at walmart
Lryyas efgxuf 50mg viagra how much does cialis cost
Ebyoen lmdtxv buying generic viagra cheap cialis
Bonpbq vfauti Buy cheap cialis walmart pharmacy
Dxokbg xnlcud Buy viagra online canadian pharmacy
Shirkadda Alphabet oo Noqotay Milkiilaha Google
Hdlchb jtkuxa best online pharmacy Rhokl...
Tdsohh zdsxyu best online pharmacy Xwpkf...
Vsfhxw elewaa online pharmacy Kcflj...
Dlizhc hpchlo online pharmacy Ywlsa...
Fvtqop vdvrqj online pharmacy Cxwvh...